Saamaynta aan dheellitirka lahayn ee COVID-19 ee ku aaddan qowmiyadaha iyo qowmiyadaha tirada yar ayaa u baahan in si deg deg ah wax looga qabto - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
June 8, 2020 Warar & Muuqaal 1
Dagaalka ka dhanka ah aafada lama guuleysan karo haddii Dowladaha ay diidaan inay aqoonsadaan sinaan la’aanta qaawan ee fayrasku keenay.
Tan iyo bilowgiisii, ayaa Taxanaha Isku xidhka Corona ayaa isku dayday inay fiiro gaar ah u yeelato sida aafadu u ifisay iftiiminta cadaalad darada aasaasiga ah iyo quursiga ka dhasha oo udub dhexaad u ah waxa aan ku naqaanay nidaamka bulsho ee caadiga ah. Tixda ugu dambaysay, “Sheeko laba fayras ah: Nolol lumay, Fursad lumay iyo fursad rajo leh, ”Oo ku saleysan qormo ay sameysay Nancy Sylvester, oo ka tarjumeysa isbarbardhiga u dhexeeya viruska iyo cadaalad darada midab takoorka ee hada looga mudaaharaadayo Mareykanka oo dhan. Qoraalkaasi wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee taxane ah oo ku saabsan midabtakoorka oo ah isha laga helo xadgudubyada joogtada ah ee foosha xun ee xuquuqda aadanaha. Qoraalkan ay soo saartay Wakiilka Sare ee Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadanaha, Michelle Bachelet, waa xaqiijin aan mugdi ku jirin oo xaqiiqda ah in dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika iyo kuwa laga tirada badan yahay, adduunka oo dhan, ay si aad u daran u saameeyeen COVID-19 marka loo eego dadka tirada badan, caddaynta cad ee a cadaalad daro weyn oo caalami ah. Cunsuriyaddu waa dhibaato caalami ah oo, sida noocyada kale ee rabshadaha ah, u baahan isbeddel nidaamsan oo ballaadhan haddii amarka caadiga ah ee lagu qeexay Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha weligiis la gaaro.
Bachelet waxay umuuqataa inay masuuliyad iska saareyso isbeddelada noocaan oo kale ah gacanta dowladda. Maxaa ku dhiirrigelin kara dawladaha inay bilaabaan isbeddelada noocaas ah? Noocee gaar ah oo isbeddel ah ayay dowladuhu abuuri karaan? Door intee le’eg ayay bulshada rayidka ka ciyaari kartaa geeddi-socodka isbeddelka? Isbeddelada noocee ah ayay tahay inay shaqsiyaadka qaadaan? Midkee ka mid ah isbedeladaas waa inaad isku daydaa inaad ku sameyso qiyamkaaga, aragtiyadaada iyo dabeecadahaaga? Sidee ayey isbeddelada ay ku sameyn karaan dadka xukuma ay uga duwanaan karaan kuwa ay ku dhaqmayaan dadka laga tirada badan yahay? Hadaf noocee ah ayaad higsaneysaa inaad ku guuleysato inta lagu jiro qeybtaan labaad ee Qaan-Gaarka Caalamiga ah ee Dadka Afrikaanka ah (2014 - 2024)?
(Waxaa daabacay: Xafiiska Qaramada Midoobay ee Wakiilka Sare ee Xuquuqda Aadanaha)
Waxaa qoray Michelle Bachelet, Wakiilka Sare ee Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadanaha
GENEVA (2 Juun 2020) - Kala duwanaanshaha sii kordhaya ee sida COVID-19 u saameynayo bulshada, iyo saameynta ugu weyn ee aan dheelitirka laheyn ee ay ku leedahay isirka iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay, oo ay ku jiraan dadka ku abtirsada Afrika, waxay soo bandhigtay sinnaan la'aan naxdin leh oo ka dhex jirta bulshooyinkayada, Wakiilka Sare ee Qaramada Midoobay Xuquuqda Aadanaha Michelle Bachelet ayaa tiri Talaadadii. Waxay xustay in sinnaan la mid ah ay sidoo kale sii hurineyso banaanbaxyada baahsan ee saameynaya boqolaal magaalooyin ku yaal Mareykanka.
"Xogta waxay noo sheegaysaa saameyn ba'an oo ka imanaya COVID-19 dadka asal ahaan ka soo jeeda Afrika, iyo sidoo kale qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee dalalka qaarkood, oo ay ku jiraan Brazil, France, United Kingdom iyo Mareykanka," ayuu yiri Bachelet. Meelo kale oo badan, waxaan fileynaa in qaabab noocan oo kale ah ay dhacayaan, laakiin ma awoodno inaan si hubaal ah u sheegno iyadoo la ogsoon yahay in xogta jinsiyadda iyo jinsiyadda aan si fudud loo ururin ama loo soo sheegin, ”ayay tiri.
Magaalada Sao Paulo ee dalka Braziil, dadka midabkoodu ugu badan yahay 62% ayey ugu dhintaan COVID-19 marka loo eego dadka caddaanka ah. Waaxda Faransiiska ee Seine Saint-Denis oo ay ku nool yihiin dad badan oo laga tirada badan yahay, ayaa sidoo kale laga soo sheegay dhimasho aad u sareysa.
Mareykanka gudahiisa, heerka dhimashada COVID-19 ee Afrikaanka Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inuu ka badan yahay labanlaab marka loo eego kooxaha kale ee isirka. Sidoo kale, xogta dawladda ee England iyo Wales waxay muujineysaa heerka dhimashada ee dadka madow, Baakistaan ​​iyo Bangaladheesh oo ku dhowaad labanlaab ah tan dadka caddaanka ah, xitaa marka fasalka iyo qaar ka mid ah arrimaha caafimaadka la tixgelinayo.
"Saameynta foosha xun ee COVID-19 ku yeelatay qowmiyadaha iyo jinsiyadaha laga tirada badan yahay ayaa si weyn looga hadlay, laakiin waxa ka sii cad waa inta wax looga qabanayo sidii wax looga qaban lahaa," ayuu yiri Bachelet. “Tallaabooyinka deg-degga ah waxay u baahan yihiin inay qaadaan Gobollada, sida mudnaanta mudnaanta kormeerka iyo baaritaanka caafimaadka, kordhinta helitaanka daryeelka caafimaadka, iyo bixinta macluumaad bartilmaameed u ah bulshooyinkaas.”
Kala duwanaanshahan ayaa laga yaabaa inay ka dhashaan arrimo badan oo la xiriira faquuqida, takooridda, iyo helitaanka caafimaadka, in kasta oo loo baahan yahay macluumaad dheeri ah oo si dhammaystiran loo fahmo waxna looga qabto xaaladda. Sinnaan la'aanta dhaqaalaha, guryaha ciriiriga ah, halista deegaanka, helitaanka daryeel caafimaad oo xadidan iyo eex xagga daryeelka ah ayaa laga yaabaa inay dhamaantood door ka ciyaaraan. Dadka ka soo jeeda jinsiyadaha iyo jinsiyadaha laga tirada badan yahay ayaa sidoo kale laga helaa tiro aad u sareysa shaqooyinka qaarkood oo halista sii kordhaya, oo ay ku jiraan gaadiidka, caafimaadka iyo qaybaha nadaafadda.
"Gobolladu uma baahna oo kaliya inay diirada saaraan saameynta imika kala duwanaanshahani ku leeyahay kooxaha iyo bulshooyinka wajahaya midab kala sooca, laakiin sidoo kale sababahooda asaasiga ah," ayuu yiri Bachelet. Fayraskani wuxuu kashifayaa sinaan la'aanta soo jireenka ah ee in badan la iska indhatiray. Dalka Mareykanka, mudaaharaadyada ka dhashay dilkii George Floyd ayaa muujinaya kaliya ma aha rabshadaha booliiska ee ka dhanka ah dadka midabka leh, laakiin sidoo kale sinaan la'aanta caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo midab takoorka cunsuriga ah.
Dhibaatooyinkan ayaa si heer sare ah ama kayarba looga arkeyaa dalal badan oo kale, halkaas oo dadka asalkoodu yahay Afrikaanka iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay ay la kulmaan noocyo takoorid ah oo xididada u ah, ”ayay raacisay. "Waa musiibo inay ku qaadatay COVID-19 inay soo bandhigto wixii ay ahayd inay muuqato - in sinnaan la'aanta loo helo daryeel caafimaad, guryo ciriiri ah iyo takoor baahsan oo bulshada ka dhigaya mid aan xasilloonayn, xasilloonaan iyo horumar leh."
Horay u socoshada waxay u baahan tahay talaabooyin deg deg ah oo ay qaadaan dowladaha si mudnaanta loo siiyo soo uruurinta xogta la kala saaray, sida lagu sheegay Bachelet Daraasad dhowaan ay sameysay Lancet ee waraaqaha iyo warbixinada kormeerka qaran ee COVID-19 ayaa lagu ogaaday in kaliya 7% ay kujiraan xog ay u kala soocday qowmiyada.
"Ururinta, kala-soocida iyo falanqaynta xogta jinsiyada ama jinsiga, iyo sidoo kale jinsiga, ayaa lagama maarmaan u ah aqoonsiga iyo wax ka qabashada sinaan la'aanta iyo takoorka qaabdhismeed ee gacan ka geysta natiijooyinka caafimaad ee liita, oo ay ku jiraan COVID-19," ayaa lagu xusay Bachelet.
"La-talin dhab ah oo joogto ah oo lala yeelanayo qowmiyadaha iyo jinsiyadaha laga tirada badan yahay siyaabaha horay loogu sii marin karo jawaabta COVID-19 sidoo kale waa muhiimad muhiim ah," ayay tiri.
“La dagaalanka cudurkan faafa lama guuleysan karo haddii Dowladuhu diidaan inay qiraan qiima-la’aanta cad ee uu virusku keenayo,” ayuu yiri Wakiilka Sare. “Ugu dambeyntiina, dadaallada wax looga qabanayo COVID-19 iyo in la bilaabo geeddi-socodka ka soo kabashada ayaa lagu guuleysan doonaa oo keliya haddii qof walba xuquuqdiisa nolosha iyo caafimaadka la ilaaliyo, iyadoo aan takoor lagu sameyn.
"Tobanka sano ee caalamiga ah ee dadka ka soo jeeda Afrika (2015-2024) sidoo kale waxay bixisaa qaab-dhismeed muhiim ah iyo fursad wax looga qabanayo caddaalad-darrada taariikheed ee si aan la dafiri karin uga qayb qaatay farqiga u dhexeeya maanta", ayuu yidhi Bachelet, oo sidoo kale ah Isu-duwaha Qaramada Midoobay ee Caalamiga Toban sano.
UNESCO Myanmar waxay raadineysaa la-taliye loogu talagalay Horumarinta Module Tababarka oo ku wajahan Dhammaan Iskuullada Waxbarashada ee Nabadda iyo Horumarka Waara
Buuggan cusub wuxuu soo bandhigayaa faallooyin ay soo direen koox caalami ah oo hormood u ah aqoonyahannada cilmiga nabada iyo xeel-dheerayaasha ku saabsan aragtida waxbarashada nabadeed iyo dhaxalka aqooneed ee Reardon. [sii wad akhriska…]
Kooxo caafimaad oo yurub ah ayaa bilaabay daraasado ku saabsan cilmiga nabada
October 25, 2015 Research 0
(Maqaalka asalka ah: Medact.org, 9-22-15) Kooxaha caafimaadka Yurub, oo ay kujirto Medact, ayaa maanta bilaabay qalab waxbarasho oo cusub si wax loogu baro kalkaaliyayaasha caafimaadka, dhakhaatiirta, ardayda iyo kuwa kaleba dhinacyada caafimaadka dagaalka, rabshadaha iyo hubka [sii wad akhriska…]
Salaanka Dhaqaalaha waa Midab Codaysan - Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada